१ सय वर्षभन्दा बढी बाँच्नुको कारण के ? - Nippon Samachar.com No 1 News Portal from Nepal in Japan
१ सय वर्षभन्दा बढी बाँच्नुको कारण के ?
काठमाडौँ । जापानी वैज्ञानिकहरुले १ सय वर्ष बाँच्नेहरुको बारेमा गोप्य राज सार्वजनिक गरेको छ । वैज्ञानिकले लामो उमेरसम्म बाँच्नुको कारण आन्द्रामा हुने एक विशेष ब्याक्टेरिया भएको बताएका छन् । आन्द्रामा हुने उक्त ब्याक्टेरियाले सेकेन्डरी बाइल नामक एसिड उत्पादन गर्छ । जसले संक्रमणसँग लड्न मद्दत गर्छ । र आन्द्राहरुलाई स्वस्थ राख्छ । र, बढ्दो उमेरको असर घटाउँछ ।
जापानको टोकियोमा रहेको कियो युनिभर्सिटी अफ मेडिसिनका वैज्ञानिकहरुले गरेको एक अध्ययनले उक्त तथ्य पत्ता लगाएको हो ।
आन्द्रामा विशेष प्रकारको ब्याक्टेरिया पाइन्छ । यसलाई गट ब्याक्टेरिया वा गट माइक्रोभियोम पनि भन्ने गरिन्छ । यो ब्याक्टेरियाले हामीले खाएको खानालाई टुक्र्याउने काम गर्छ । यसले खानालाई सजिल्यैसँग पचाउँछ । र खानामा हुने पोषक तत्वलाई शरीरका अंगहरुमा मिलाउने काम गर्छ । यसले शरीरलाई असर गर्ने ब्याक्टेरियाको वृद्धिमा अवरोध पुर्याउँछ । शरीरमा गट ब्याक्टेरियाको मात्रा घट्यो भने खराब ब्याक्टेरियाको मात्रा बढ्छ । जसले गर्दा पेटमा अल्सेरेटिभ कोलाइटस बढ्न थाल्छ ।वैज्ञानिकहरुले १ सय ६० जना मानिसहरुमाथि अध्ययन गरेका थिए । जुन समूहको औषध उमेर १०७ वर्ष थियो । ति व्यक्तिहरुको शरीरमा भेटिएका ब्याक्टेरियाको तुलना ८५ देखि ८९ वर्ष उमेरका १ सय १२ र २१ देखि ५५ वर्षका ४७ जनाको ब्याक्टेरियासँग गरिएको थियो । जसबाट धेरै उमेरका व्यक्तिहरुमा सेकेन्डरी बाइल एसिडको मात्रा अत्यधिक थियो ।
भारतको नेशनल इन्स्टीच्युट अफ हेल्थका अनुसार बाइल एसिड एक तरल पदार्थ हो । यसको निर्माण कलेजोमा हुन्छ भने भण्डारण गलब्लाडरमा हुन्छ । यसले खाना पचाउने काम गर्छ । विशेषगरी यसले बोसोयुक्त खानेकुरालाई सजिल्यै पचाउछ । कलेजोबाट निस्किएर बाइल एसिड आन्दामा पुग्छ र त्यहाँ भएको गट ब्याक्टेरियाद्वारा सेकेन्डरी बाइल एसिडमा परिवर्तन हुन्छ । सेकेन्डरी बाइल एसिड स्वस्थ रहन आवश्यक तत्व हो ।
जापानी अध्ययन अनुसार जो व्यक्ति १ सय वर्षभन्दा बढी बाँच्छन् उनीहरुको शरीरमा विशेष प्रकारको ब्याक्टेरियाले अहम भूमिका खेल्छ । र गम्भीर रोगहरु लाग्न दिँदैन ।
अनुसन्धानकर्ता डा. केन्या हन्डा भन्छिन्, ‘ १ सय वर्ष उमेर र आन्द्राको ब्याक्टेरियाबीच सम्बन्ध हुन्छ । तर, सबैको अर्थ १ सय वर्षभन्दा बढी बाँच्नुमा यो ब्याक्टेरिया मात्र कारण होइन । यसका लागि थप अनुसन्धान बाँकी छ । तर, यो ब्याक्टेरिया लामो उमेरको लागि महत्त्वपूर्ण छ ।